Ngezinye izikhathi imibono evamile kakhulu kukhona impumelelo. Abanye onjiniyela umdlalo ozama, beveza okuthile ngendlela emangalisayo eyinkimbinkimbi, kodwa ngenxa iphrojekthi ehluleka ngiphumelele. Kodwa umlando ligcwele izibonelo umbono banal kakhulu Kwatholakala eqinisweni ekhaliphile. Ngo "Maynkraft", isibonelo, akukho ihluzo eliphezulu, indaba emnandi ezingu athuthukile. Usanda ukufinyelela emhlabeni, njalo isici ukuthi ungakwazi nomthelela, futhi ukusinda kuleli zwe. Abaningi babecabanga ukuthi lena kwakuyoba iphrojekthi maphakathi no-ezingeni aziwa kuphela emibuthanweni ewumngcingo, kodwa namuhla "Maynkraft" has izigidi abalandeli emazweni ahlukahlukene.
Ngisho Ngokwesibonelo ngaphezulu okuphawuleka uchungechunge umdlalo "The Sims" - ngokusobala, umuntu engathi nentshisekelo Simulator ukuphila, lapho nje udinga ukuhlomisa efulethini lakhe futhi akhulume namanye NPCs? Kodwa lo mdlalo uye waba cult, kodwa akakwazanga ukugwema bokwenza. abadlali abaningi bakhononda ngokuthi ingxenye yesithathu umsebenzi ngempela engazinzile. Ngakho, uma kuqale "The Sims 3" yini okufanele uyenze?
A kancane mayelana umdlalo
Ukuze ukubhekana nezinkinga technical, kufanele siqonde kuqala ukuthi kakhulu isimiso yomdlalo. Ngakho, uthola ukufinyelela wonke umuzi, okuyinto angahamba khona ukukhetha izindlu zabo futhi ukuhlomisa ke. Lokho umdlalo izigaba iqedwe yokulayisha, kodwa kakhulu anda esikhathini umthwalo yomdlalo. Futhi udabuka kakhulu lapho ulayisha imizuzu eziyishumi balondolozwe noma ukudala umdlalo omusha, ngokungazelelwe wena kuqale "The Sims 3". Okufanele ukwenze esimweni esinjalo?
Njengoba nganoma iyiphi enye indlela efanayo, okokuqala udinga ukuhlola ukuthi ukucushwa kwe nezidingo zomshini kukhompyutha yakho, wadalula onjiniyela. Mhlawumbe lena yiyona ndlela nesizathu esenza izimpukane "The Sims 3". Yini okumelwe uyenze? Abantu abaningi baqale ukwethuka ucabange ukuthi imiphumela iyoba esabekayo, kodwa ngempela awubalulekile ukukhathazeka ngokushesha. Kumelwe ufunde isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo ukuqeda eziningi izinkinga futhi kufanele siqale ngamazwi nezidingo zesistimu. Sikhishwe yokuthi "i-The Sims 3" - lena akuyona umdlalo omusha, udinga kuphela ezimbili umthamo gigahertz processor, omunye igigabhaythi we-RAM 128 wamamegabhayithi memory ividiyo, ngakho lo mdlalo uzobe egijima kukhompyutha yakho. Kodwa uma kunjalo kwenzeka ukuthi okungenani eyodwa kukho okulandelayo kuka udinga ke udinga ukuthenga ngcono yekhompyutha yakho.
Eqinisweni, usuthole isizathu izimpukane "The Sims 3". Yini okufanele uyenze ngokulandelayo? Thenga i-PC entsha, noma nge izesekeli ezokwenza ukwanelisa ngezidingo zesistimu. Futhi-ke, kungenzeka impela, izinkinga zakho zisuke phezu. Kodwa uma lokhu akwenzeki, udinga ukubheka imbangela olwengeziwe.
Ukucinga amafayela elonakele
Esinye sezizathu ezinkulu zokuthi kungani izimpukane "The Sims 3" - kuba phambi ifayela ezilimele noma ezingekho edingekayo. Icala lokuqala esivamile ezinguqulweni ilayisensi yomdlalo, kanti eyesibili - ukuze isigebengu. Ngakho, uma une ukuphahlazeka lo mdlalo, udinga ukuhlola ukuthi kukhona amafayela onakele ukuthi kungadala izinkinga. Lokhu kungenziwa kuphela reinstallation ephelele - ukususa umdlalo efakwe nokuqopha kukhompyutha yakho futhi. Uma inkinga bungasekho, kusho ukuthi amanye amafayela okulimele. Uma ungazange wenza iyiphi imisebenzi ngamafayela umdlalo, kufanele uhlole kukhompyutha yakho amagciwane, njengoba kungalimaza umdlalo. Njengoba for izinguqulo pirated, kukhona inkinga ngokwayo ingase ecasha unqulo wesi arab. Iqiniso lokuthi izinguqulo pirated - ilayisensi aqhephukile, nokuthi basebenzisa ziphi izindlela, kuhlanganise etholakalayo amafayela ufa. Antivirus futhi ngokuvamile ukuqaphela leli fayela njenge igciwane futhi ibekwe endaweni ngokuhlukaniswa noma ususe. Kodwa lena isizathu esenza umdlalo angeke uqale. Yini ongayenza uma umdlalo kuqale "The Sims 3"?
Inkinga nge amaphilisi
Njengoba bonke abalandeli usazi kuhle kakhulu, umdlalo base ochungechungeni iyingxenyekazi kuphela ukufakwa ahlukahlukene-add-on ukuthi wengeze eziningi okuqukethwe ezintsha nezithakazelisayo. Ngokuvamile eshayisa umdlalo "The Sims 3" ngenxa yalokhu. Ngezinye izikhathi i-computer ayikwazi ukusekela anezele eziningi, ukulungiswa ngezinye izikhathi Awunalo ilayisensi, futhi nabo kungabangela ukuhamba. Ngokuvamile, uma ozifakile eningi-add-on kanye Mods, zama ukususa kubo bese uhlole nekusebenta umdlalo - uma uzoma ukundiza ke uwasulile mod ukuthi kwaba enonya. Kodwa uma emva ukususwa izengezo namanje eshayisa umdlalo "The Sims 3" Khona-ke imbangela kumele wafuna kwenye indawo.
Njengazo zonke imidlalo ye-computer, e "The Sims 3" lisetshenzisiwe nangokuqondene ukusebenzisa izinhlelo ezengeziwe. Ngokwesibonelo, udinga ukufaka i-ka iDirectX, ekhadini ividiyo yakho ngendlela efanele yakhiqizwa isithombe. Kunezindlela izinhlelo ezimbalwa saziso ukuthi kudingeka ukusebenzisa noma yimaphi amageyimu. "The Sims 3" futhi kudinga amanye amafayela ekhethekile, kuba umuntu azalwa nalo lokuhlaziya le phrojekthi. Hlola ukuthi zonke zazo ifakiwe. Uma une "The Sims 3" ukuphahlazeka uma iqala ibhizinisi kungenzeka nje ukuthi. Umdlalo ungayitholi amafayela idinga ukusebenza, bese iyama, kokuphazamisa ukulanda.
Ilayisensi noma pirates?
Uma sihlushwa imibuzo mayelana nokuthi kungani off "The Sims 3", yingakho izingozi umdlalo nokumisa ke nganoma yisiphi isizathu, kufanele babheke ngenxa yezizathu eziye ezichazwe ngenhla. Kodwa izincomo ebaluleke kakhulu ukuthi kufanele ulandele - ukufaka inguqulo ilayisensi yomdlalo. Yiqiniso, akekho kungathinta isinqumo sakho ngokushesha njengoba ungakwazi ukuphatha imali yakho. Kodwa uma uthenga bese ufake umdlalo ilayisensi, kuyoba ingasaphathwa yenkinga, kanye izinyathelo zokunciphisa izingozi. Lo mdlalo "The Sims 3" e 99% amacala ngeke ngokuvamile baqala futhi eziqhutshwa, angeke kushiwo mayelana version pirated. Ngezinye izikhathi kufanele ulande izinguqulo ezimbili noma ezintathu umdlalo zangena kuma, ngaphambi uzothola okungenani oyedwa isisebenzi, ingasaphathwa izinkinga kungenzeka esikhathini esizayo.
Skyrim - Secrets kanye nolwazi nje ewusizo
Skyrim: kanjani ukushada kulowo mdlalo?
Darion Mograine - Ophakeme neNkosi Order of the Ebon Blade
Kanjani ukuze ubhale izincwadi ezinemibala Minecraft phezu plate
Inkulumo ethi "izindlela zikaNkulunkulu inscrutable": kusho ukuthini, indaba umsuka
Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka imbewu yefilakisi. umbono uchwepheshe
Ukwenza izingubo ngokwezifiso - imfashini, isitayela, inhle
Ukujwayela amakhemikhali abesifazane. Ukwazi abaqalayo
Museum of dessert yaseRussia eZvenigorod: imibukiso, amaswidi aseRussia, zokupheka zasendulo zaseRussia
Indlela ukusonta yerosari? ngezindlela ezintathu